Ogaden News Agency (ONA) – Filim ay daadihinayaan Cabdulaahi Xuseen iyo labadii wariye oo SVT uu soo saaray
Filim ay daadihinayaan Cabdulaahi Xuseen iyo labadii wariye oo SVT uu soo saaray
Posted by ONA Admin	/ October 12, 2013
Waxaa maalinka isniinta 9 ka fiidnimo ee talaadadu soogalayso laga daawan doonaa first chanel ka Sweden svt1, film Documentry ah oo ka hadli doona tacadiyada loo gaysto dadka shacabka ah ee S.Ogadenya. Dalaka Denmark iyo Finland ayaa sidoo kale laga daawan karaa balse waxaa si fudud meel kasta looga daawan karaa website ka tv ga oo ah www.svtplay.se , waxana filinka la soo galin doonaan webka ama isla habeenkaas ama maalinka ku xiga.
Filinka waxaa wada daadihinaya mudane Cabdulaahi oo kafaaloonaya dhibaatooyinka kajira Ogadenia iyo labadii wariye ee Martin iyo Johan oo kafaaloonaya sidii loo wax yeeleeyay. Filinka ayaa waxa uu xooga saarayaa daah furida been abuurka iyo brobogandada uu guumaysiga itoobiya adeegsado gaar ahaan gacanyaraha guumaysiga ee Cabdi iley.
Filinka loogu magac bixiyay ESSENCE OF TERROR, ayaa taariikhda shacabka ogadenia markii ugu horaysay noqonaya mid si aad u balaadhan oo wakhti badan lagaliyay uga faaloonaya falal danbiyeedka shacabkaas masaakiinta ah lagu hayo, indhaha caalamkana kusoojeedin doona shacabka laga hor istaagtay dhamaan xuquuqihii aadanimo ee ay lahaayeen.
Mudane Cabdulaahi Xuseen oo horay loola wada socday xaaladii adkayd ee uu soo maray intii uu guumaysiga kasoo horjeedsaday iyo shirqooladii faraha badnaa ee Nairobi intuu kusugnaa ay cadawga malaayiinta ku bixiyeen sidii ay u dili lahaayeen xogahan muhiimka ahna u horjoogsan lahaayeen ayay shacabku baryahanba ka shin tirinayeen inay daawadaan filimka uu Cabdulaahi ka ballan qaaday inuu soo saarayo iyadoo uu cadawguna dhankiisa beeno shacabka lagu niyad jabinayo soo daabici jiray.
Cabdulaahi Xuseen oo u dhabar adaygay dhamaan khatartii iyo marxaladihii adkaa ee uu soo maray ayaa isagu kutaamayay in uu mar uun si heer caalami ah u soo bandhigo filinkan iyo kuwo kale oo soo socda, isagoo yidhi waxaan ku dadaalayay in aysan hawshu iga noqon filin yar oo ay qurbajoogteena kaliyu daawato balse uu noqdo mid caalamka loo soo bandhigo wakhtigay dooni haqaadatee, waanan ogaa in la tiiksaday waqtiga uu qaatay filimkan soo saaridiisa.
Filinkan oo ah full documentary si aad u cilmiyaysan loo habeeyay ayaa socon doona 58 daqiiqo ama hal saac, waxaana daawan doona malaayiin reer yurub ah xaqiiqda Ogadeniyana ka jirtana ka markhaati kici doona.
FB: Maadaama filinku uu usamaysan yahay qaab international ah ama qaabkii ay caalamku wax ku fahmi lahaayeen shacabka Somaliyeed ee daawan doona sifiican ha u dhuuxaan fariimaha tooska ah iyo kuwa qarsoon ee uu filinkaasi caalamka gaadhsiindoono caalamka.